Ayna System – Category – Android – Vessoft
Ayna System – Android
العربية, English, Українська, Français... Framaroot 1.9.3
Ayna System Software ayaa si aad u hesho Root-xuquuqda u Qalabka ugu ka saarayaasha kala duwan. Sidoo kale software ah u saamaxaaya in ay isticmaalaan qoraal gaar ah kaas oo loogu talagalay dadka isticmaala sare.
العربية, English, Français, Español... Hola Launcher 2.0.5
Ayna System Desktop The software fudud iyo MFT in la beddelo interface iyo in la xoojiyo qalabka Android sida ay shakhsi ahaaneed.
Ayna System software ah in economize iyo ka hortagga isticmaalka xad-dhaafka ah tamarta u saamaxaya in ay sii batteriga qalabka xaalad shaqo muddo dheer.
العربية, English, Українська, Français... APUS Launcher 2.2
Ayna System Desktop Hab fudud oo degdeg badan in ay tayadoodii desktop-ka. Software wuxuu bixiyaa shaqo oo ugu badnaan degdeg ah oo qalab ah oo ka kooban a codsiyada waxtar leh.
العربية, English, Français, Español... ES File Explorer 4.0.4.7
العربية, English, Українська, Français... All-In-One Toolbox 5.3.5
Ayna System Set A qalab awood badan si ay tayadoodii iyo in la kordhiyo waxqabadka nidaamka. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay ka saarto faylasha ku meel gaar ah, nadiif ah khasnado iyo tirtirto codsiyada.